Yenza imvelaphi yeTelegram ngomsebenzi wayo omtsha | I-Androidsis
I-Telegram ikuvumela ukuba wenze ngokwezifiso i-wallpapers zeengxoxo kwinguqulelo yayo entsha
UEder Ferreño | | Ukusetyenziswa kwe-Android
Yocingo usishiya uhlaziyo ezininzi kwezi veki zidlulileyo. Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo usetyenziso lomyalezo ukuphucula ukusebenza kwamaqela ngokusemthethweni, kunye nohlobo lwayo olutsha. Ngapha koko, lixesha elifutshane ukusukela usetyenziso tshintsha uyilo emva kohlaziyo. Kwaye inyanga kaFebruwari iqala kakade ngohlaziyo lwesicelo.
Ukusukela ukuba iTelegram ibhengeza uhlaziyo lwayo olutsha, esele isetyenziswa ngokusesikweni kubasebenzisi. Kule nguqulo intsha yeapp sifumana iindaba ezingakumbi. Eyona nto ibaluleke kakhulu kubo yile ikuvumela ukuba wenze iphepha lodonga ngokwezifiso Ngexesha leencoko esinazo kwisicelo.
Kule meko, into esetyenziswa ngabasebenzisi luthotho lwezixhobo zokwenza oku kulungiswa kwamaphephadonga kwincoko. I-Telegram ibabize ngokuba yi-Chat Backgrounds 2.0 kolu hlaziyo. Le yimisebenzi embalwa enomdla kakhulu, ethembisa ukuba luncedo kubasebenzisi.
Enkosi kubo ukuba kunokwenzeka yenza ezakho ii-wallpapers ngendlela elula. Ukwenza oku, ungasebenzisa imibala ethe tyaba, okanye ujonge iipateni okanye imvelaphi kwi-Intanethi. Iziphumo zinokongezwa kubo. Konke oku ukuze umsebenzisi ngamnye kwisicelo abe nemvelaphi ayithandayo kakhulu. Zivakala zintle kwaye zinomdla kakhulu. Emva koko siza kukuxelela yonke into malunga nendlela esebenza ngayo.
Amaphephadonga aqhelekileyo kwiTelegram
Ukuze uqwalasele yonke into enxulumene nalamaphephadonga abhalwe igama lakho kwisicelo, kuya kufuneka uye kwicandelo elithile Kubasebenzisi be-Android, kuya kufuneka ufake useto lwesicelo kwaye emva koko uncokole noseto. Ngaphakathi kweli candelo thina sifumana icandelo elibizwa ngokuba yiNgxoxo yeMvelaphi. Kukuyo apho kuya kufuneka ungene ukuze utshintshe yonke le nto.
Kulapho kukho inani lezinto onokukhetha kuzo kubasebenzisi. Yocingo ivumela khetha ifoto emiselweyo kwi-app, layisha ifoto kwigalari yefowuni yakho okanye ukhangele ifoto kwi-intanethi (ngokunqakraza kwi icon yeglass). Kuyenzeka ukuba ukhethe umbala webala kwezi zikhoyo. Umbono kukuba umsebenzisi ngamnye uya kukhetha ukhetho olusebenza kubo. Kodwa, emva koko unokuhlala ukongeza iziphumo.
Kuba iTelegram ibonisa ngamaxesha onke ukubanakho ukufaka ukufiphala okanye ukufiphala. Ikwavumela ukuba ungene kwisiphumo separallax, esiya kususa iphepha lodonga xa umsebenzisi eyitsala ifowuni xa uyisebenzisa. Kwimeko yesiphumo sokuqala, kunokuba luncedo xa ufunda izingxoxo. Kuba imvelaphi inokuba nezinto ezininzi okanye ezo imiyalezo iyabonakala. Ke ngoko, ukubonakala kwemiyalezo kubalulekile.
Itelegram ikuvumela ukuba ukhangele iifoto kwi-Intanethi. Ukwenza oku, usetyenziso luye yazisa uthotho lwezihluzi Inyaniso kukuba zezona zinomdla kakhulu. Umzekelo, ukuba ukhangela umbala kwaye wongeza igama kuwo, uya kukhangela into enxulumene nemigaqo. Oko kukuthi, ukuba ukhangela okuluhlaza kunye nemoto, iya kukhangela iimoto eziluhlaza kwaye ikubonise iziphumo. Akukho mida yamagama yokukhangela kule meko. Nangona amagama engaphezulu, iziphumo ziya kuchaneka ngakumbi.
Ngaphandle kwamathandabuzo, uthotho lwemisebenzi enomdla kakhulu ye- Yenza ngokusesikweni ukusetyenziswa kweTelegram kwi-Android ngakumbi. Isicelo sihlala simi ngokukuko malunga noku, Nokuba uvumela imixholo yokwenza ngokwezifiso, kodwa ngoku kunokwenzeka ukuba ukwenze ngamaphephadonga. Into ngokuqinisekileyo abasebenzisi bayayixabisa ngokuqinisekileyo. Le misebenzi mitsha iyafumaneka kuhlobo olutsha lwesicelo. Iyandiswa ngoku, kwaye iyafumaneka ngokusemthethweni kuGoogle Play. Ucinga ntoni ngolu tshintsho kwiapp?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » I-Telegram ikuvumela ukuba wenze ngokwezifiso i-wallpapers zeengxoxo kwinguqulelo yayo entsha
Isikhova esimnyama sitsho
Phendula kwi-Owl emnyama
Yilwa nabanye abadlali kwimilo esekwe kwiMobster
Sihlalutya ii-headsets ezingenazingcingo zeMixcder E9: elona xabiso liphezulu lemali kwintengiso